127 isa ireo marary nangataka fivavahana manokana tao Moramanga - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nankalazaina teto amin’ny diosezin’i Moramanga ny Alahady faha 7 febiroary 2016 ny andro iraisam-pirenena faha 24 ho an’ny marary, tao amin’ny Sanctuaire Notre Dame de Mont Carmel Ambarilava. Araka ny lohahevitra natolotry ny Ray Masina : « Miankina amin’i Jesoa Mpamindra fo toa an’i Maria : Ataovy izay rehetra ho lazainy aminareo » (Jn 2,5). Ny 11 febiroary no tena andro fankalazana. Noho izy io mitontona alakamisy sady andro fiasana anefa dia izao naroso izao ny fotoana fankalazana.
Sorona Masina notarihan’i Mgr Gaëtano di Pierro, evekan’i Moramanga, no natao. Notronin’i Mgr Antonio Scopelliti, evekan’ny diosezin’Ambatondrazaka misotro ronono. Nampiana pretra maro. Nahatratra 127 ireo marary nisoratra anarana nialoha.
Nanantitrantitra ny Eveka nandritra ny fampianarany fa efa ela Andriamanitra Raintsika no niantso ny olona rehetra hamonjy ny marary, tamin’ny alalan’ny teniny izay feno fitiavana. Vokatr’izay fitiavany izay no nanomezany ny Zanany Lahitokana ho famonjena sy ho fampianarana ny olombelona. Tsy natoky io fitiavany io anefa ny olombelona ka lasa niady tamin’ny zavaboary rehetra izay nahatonga ny fahotana ho fototry ny aretina sy ny fijaliana teto an-tany.
2000 taona lasa izay i Jesoa Kristy no efa nampianatra ny apostoly ny amin’ny hanaovana asa famonjena tsy misy tambiny ho an’ny olona. Fa toa an’i Jodasy no iafaran’ny olona izay mitaky tambiny amin’ny asa izay ataony. Nankahery an’ireo marary rehetra ihany koa izy fa tsy sazy akory ny aretina fa fitsapana ho an’ny finoana. Miantso ny tanora sy ny ankizy i Jesoa, hoy ihany izy, nandritra ny fampianarana. Nataony mba hihaino ny tenin’Andriamanitra mandrakariva izy ireo sy hanantona sy hitsidika ny marary.
Tamin’ny 5 desambra 2015 no nijoro voalohany ny birao mitantana ny CDS (Commission Diocesaine de la Santé): ahitana pretra, relijiozy vavy, dokotera lahika sy mpampivelona. Mahatratra 30 ireo mpikambana ao anatiny amin’izao fotoana izao. Mompera Rafalimanana Ainarilala Théodore Manitrasoa ao amin’ny fikambanan’ny Mompera Karma no pretra miandraikitra sy misahana izany ato amin’ny diosezin’i Moramanga.
Ahitana mpitsabo sy mpilatsaka an-tsitra-po ara-pahasalamana samy miasa tsy misy tambiny avokoa ny birao. Hanatratra ny tanjona, hiasa sy hanao ny fanentanana ny EVA (Education à la Vie et à l’Amour) eny anivon’ny sekoly ary hampiofana an’ireo mpiomana amin’ny tokantrano, momba ny fahasalamana mialoha ny fanambadiana. Jereny manokana koa ny fianakaviana manoloana ny fahasalamana ankehitriny. Izany no asa fanompoana ataon’izy ireo ka itetezana an’ireo toerana maro ato anatin’ny diosezy.
Ho azy ireo dia tsy hisafidianana ary tsy hanavahana finoana ny famonjena ny marary ka iezahan’izy ireo hanampiana ireo marary sahirana tonga eo aminy. Nizarana vary sy paty ary savony ireo marary rehetra tonga tao, ho mariky ny fiaraha-misakafo.
Fotoana nanoloran’ny Eveka tamin’ny vahoaka kristianina tonga teo, ny pretra aomonie vaovao hisahana momba ny fahasalamana eto amin’ny diosezin’i Moramanga io fotoana io. Na dia teo aza ireo nisoratra anarana mialoha hahazo fahasoavana manokana dia nahazo ny anjarany avokoa ireo marary rehetra. Teo koa no nilazany fa tonga eto amin’ny diosezin’i Moramanga ary hiasa eny amin’ny Ekar Antsirinala ny fikambanan’ireo masera « Suore Madre Pie » avy any Italia.